Iyo MacBook Air inodarika iyo 16-inch MacBook Pro | Ndinobva mac
MacBook Mhepo inopfuura 16-inch MacBook Pro
Yakanga iri nyaya yenguva nhamba dzisati dzapihwa naApple pachiitiko chinonzi "Chimwezve chinhu" Chipiri chapfuura dzakasimbiswa kana kwete. Kunyangwe ichokwadi kuti kuchiri kumangwanani kudiki kuti zvisimbise zviri pamutemo masimba ese akakura eM1, yekutanga Geekbench mhedzisiro iri pano uye ivo vanoratidza chimwe chinhu icho vazhinji vedu tanga tichitoziva: simba reaApple processor rinonakidza.
Mhedzisiro yekutanga inoratidzwa mumiyedzo Geekbench vanodaro Iyo nyowani M1-yakavakirwa MacBook Mhepo ine simba rakawanda kupfuura base base processor mu 16 2019-inch MacBook Pro.
Pano tinosiya kubatwa pamwe nemhedzisiro inowanikwa mu MacBook Air base, iine 8 GB ye RAM uye 3,2 GHz:
ari 16-inch MacBook Pro ine Intel i9 processor mhinduro zvinotevera:
Zvakare mu iyo multicore bvunzo imwe poindi pazasi peMac Pro kunonoka 2019 uye pamusoro peMac Pro 2013, idzo dzaive neyakagadzirwa kare. Pasina mubvunzo chikara chechokwadi icho zvakare chisingade mafeni uye icho chine mutengo wekutanga we1.129 euros, chaizvo kombiyuta ine simba chaizvo kuti ive yekutanga kuvhurwa neApple chaicho maARM processor. Mumazuva mashoma anotevera kuyedzwa kweMacBook Pro nyowani neM1 neMac mini kuchanyatso kuoneka.
Hazvishamise kuti maM1 matsva aya ane simba uye zvinoramba zvichionekwa kuti vanoita sei kupfuura aya mabvunzo, asi musimboti zvinoita sekunge ivo havazove nematambudziko emagetsi mu processor, Asi kupesana kwakazara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » MacBook Mhepo inopfuura 16-inch MacBook Pro
Yakachipa iPhone dzimwe nzira pane iPhone 12